Ihe ngbachapu DLC maka ihe ndozi maka HID Fixtures 240W China Manufacturer
Nkọwa:Ngwongwo Ntughari Azu maka HID Fixtures,Ihe mgbochi Led Retrofit,Ihe Ngwongwo DLC Led 240W
Home > Ngwaahịa > Ihe nnweta ozuzu ọkụ > Ihe ngbachapu DLC maka ihe ndozi maka HID Fixtures 240W
Ihe Nlereanya.: BB-SDD-240WD1
Bbier 240W Akpa Ngwongwo Azụ maka HID Ngwa bụ obere ike oriri na mfe iji wụnye. Ndị a na-eji ihe mpempe akwụkwọ a na- echekwa ihe karịrị 80% na ọkụ eletrik ma e jiri ya tụnyere mgbanaka dị elu nke sodium na ọla ọkụ. A na-eji kits anyị DLC Led Retrofit eme ihe n'ọtụtụ ebe, Ogige Tennis, Canopy gas station, n'okporo ámá, ọkụ ịgba chaa chaa, shoebox, idebe mmiri ọkụ, dochie 1000Watt Metal Halide HPS HID traditional lamp. Anyị na-enye akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụrụngwa L nke a maka ebe a na-edebe ụgbọala Lot Fixtures .
N'ebe dị elu Egwuregwu na ndị ọkwọ ụgbọala, ngwá ọrụ anyị dị na L ed Recessed Light nwere 130 lumen per watt na 31,200 lumen mmepụta. Nke a L ed Retrofit Kit maka Recessed Lighting nwere obosara 120 ogo doo n'akuku ntule. Meanwell Driver maka arụmọrụ zuru oke. A na-emepụta Egwuregwu Akụrụngwa L nke Na-ahụ Maka Gburugburu n'èzí iji mee ka ọ dịkwuo mma na nnukwu ákwà, aluminom Heat Sink and Sunon Fan iji hụ ogologo ndụ.
Ngwongwo Ntughari Azu maka HID Fixtures Ihe mgbochi Led Retrofit Ihe Ngwongwo DLC Led 240W